Home Wararka Dhageyso “Tani maaha tii wax gujeeysiga, ee waa badbaadada Galmudug iyo shacabkeeda”
Dhageyso “Tani maaha tii wax gujeeysiga, ee waa badbaadada Galmudug iyo shacabkeeda”
Madaxweyne Axmad Ducaale Xaaf oo dhowr cisho ka hor ku dhawaaqay in uu dib ula wareegay hogaankii Galmudug isla markaana uu dowlada Fedaraalka uu kala noqday wakiilashadii uu siiyay ayaa hadalkiisa waxa uu abuuray dareen cusub oo ku soo kordhay dadka reer Galmudug.
Hadalka ka soo yeeray MW Axmad Ducaale Xaaf ayaa dad badani soo dhaweeyeen iyaga oo ka daalay beenta iyo jahawareerka uu Xasan Kheyre ka abuuray deegaanka Galmudug. Shacabka reer Galmudug ayaa u muuqata in ayan marnaba suuragal noqon karin uu halkaas ka dhashay maamul uu umuliso ka yahay Xasan Cali Kheyre.
MW Axmad Ducaale Xaaf oo dhawr mar ka noqday hadalo iyo balanqaadyo uu horay u sameeyay ayaa dad badan u tuhmeen in uu markale doonayo in uu dano isaga u gaar ah ka fushado Galmudug, laakiin MOL oo si toos ah ula xiriirtay Madaxweyne Xaaf ayuu u sheegay in markaan ay ka go’an tahay in uu dib u heshiin dhab ah u sameeyo shacabka reer Galmudug.
“adeer mid baan kuu sheegayaa… Tani maaha tii wax gujeeysiga, ee waa badbaadada Galmudug iyo shacabkeeda, wayna naga go’an tahay in Galmudug dib loo soo nooleeyo oo laga qabto ina Kheyre oo ilaah umaddaan ku ibtaleeyay”, ayuu yiri Madaxweyne Xaaf.
Sida ay noo xaqiijiyeen dad ka mida golihiisa wasiirada, saaxibadiisa iyo qaar ka mid eheladiisa, talabaada uu hadda qaaday Madaxweyne Xaaf waa mid uu daacad ka yahay si qalbi nadiif ahna uu ugu doonayo in uu Galmudug ku badbaadiyo.
Xasan Kheyre oo dareemaya culayska uu leeyahay Madaxweyne Xaaf ayaa waxa uu suuqa u galiyay MW Xaaf in uu talabadaan u qaaday si uu lacag uga qaato dowlada Fedaraalka, laakiin MW Axmad Ducaale Xaaf arintaas si aan gabasho lahaynin ayuu ugu soo horjeestay. Sababaha uu wareeysiyada u siinayo idaacadaha iyo taleefishinada dalka ayaana sabab u ah sida ay daacad uga tahay in Galmudug laga badbaadiyo Xasan Cali Kheyre iyo kooxaha uu la shaqeeysto.